बीपीको प्रसूति गृहमा बेड अभाव | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार बीपीको प्रसूति गृहमा बेड अभाव
बीपीको प्रसूति गृहमा बेड अभाव
एउटा बेडमा २ बिरामी राखेर उपचार
धरान । सरकारले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य संस्थामै बच्चा जन्माउन अनुरोध गरिरहेको बेला बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आइपुगेका गर्भवती महिलाहरू बेड अभावका कारण उपचार पाउन सकेका छैनन् । पूर्वकै रेफरल सेण्टर बनेको प्रतिष्ठानमा सुत्केरी गराउन आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सुत्केरी गराउने समय नाघ्दा पनि अस्पताल भर्ना गर्न नै समस्या हुने गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको प्रसूति विभागमा सुत्केरी गराउन आउनेको चाप बढ्दै गएपछि भुइँमै राखेर उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ । प्रसूति विभागको आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउन आउने बिरामीलाई बेड अभाव हुन थाले एउटै बेडमा २ जना बिरामी राखेर सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । प्रतिष्ठानको प्रसूति विभागको छुट्टै ७ बेडको आकस्मिक कक्ष छ । एकातिर बेडमा राखेर बिरामीलाई उपचार गराउन नपाइरहेकोमा नर्स तथा चिकित्सकको पनि झर्किने बानीले बिरामीले सहज उपचार नपाएको बिरामीका आफन्तहरू बताउँछन् ।
अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि चाप थेग्न नसक्दा बिरामी र चिकित्सकबीच दैनिकजसो विवाद पनि हुने गरेको छ । प्रसूति विभागमा जम्मा १सय ४७ बेड सङ्ख्या छ भने आकस्मिक कक्षको क्षमता ३० जनाको मात्र छ । आकस्मिक कक्षमा दैनिकजसो ६० देखि ८० जना प्रसूतिका लागि आइपुग्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जहिले पनि हम्मेहम्मे पर्ने गरेको स्त्री तथा प्रसूति विभागका प्रमुख मोहनचन्द्र रेग्मीको भनाइ छ । ‘सुत्केरी गराउँदा न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘जटिल अवस्था रहन्छ, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्छ, तर सेवा दिन सकिरहेको छैनौं ।’
प्रसूति विभागको ओपीडीमा प्रसूति समस्या लिएर आउनेको सङ्ख्या दैनिक सरदर ६ सय जना रहेको छ । प्रतिष्ठानमा दक्ष जनशक्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि बेड अभावका कारण बिरामीको चाप चिकित्सकले थेग्न नसकेको रेग्मीले बताए । प्रतिष्ठानको प्रसूति विभागमा बिरामीको चाप भर्खरैदेखि मात्रै बढ्न थालेको होइन । विगत ५ वर्षदेखि नै यस्तो समस्या आएको हो ।
विभागमा अत्यधिक चाप बढ्न थालेपछि ३ वर्षअघि ४ सय शय्याको मातृशिशु स्याहार केन्द्रको शिलान्यास गरिएको थियो । केन्द्र निर्माणका लागि केज कन्सल्ट्याण्ट रहेको शर्मा रसुवा जेभी काठमाडौंलाई ३ वर्षभित्र सक्ने गरी ठेक्का दिएको थियो । रू. ७२ करोडमा दिएको ठेक्का पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. बलभद्रप्रसाद दासले २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमा टेण्डर लगाएको भन्दै विवाद शुरू भएपछि भवन निर्माण कार्य रोकिएको छ, जसले प्रतिष्ठानको गाइनो विभागको सेवा समेत प्रभावित भएको छ ।